Chọpụta ihe njem egwuregwu bụ na ebe ị ga - eme ya | Akụkọ Njem
El njem egwuregwu aburula uzo ozo nke ahụ na-aghọwanye ewu ewu. Formsdị nke njem na-agbanwe ngwa ngwa site na ijikọ ụwa ọnụ, nkwalite nkwukọrịta na ụgwọ njem ụgbọ ala, nke pụtara na taa anyị nwere ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji gaa ebe dị iche iche, na-agbanwe ụwa nke njem ọtụtụ ihe. Ebe dị anya bụ njem otu a na-eme atụmatụ ịnọ n'ụsọ osimiri ma ọ bụ lee ebe edozi na obodo.
Taa ụwa nke njem dị iche iche n'ezie na n'efu, ebe ahụ ka njem njem malitere, omume nke na-adọrọ mmasị na nke nwere ike bụrụ ezigbo mkpali njem. Anyị ga-ahụ ihe egwuregwu ndị njem a gụnyere na otu anyị nwere ike isi mee ụdị njem a ma ọ bụ ebe enwere ike ịchọta ya.
1 Gịnị bụ egwuregwu ndị njem?
2 Dị egwuregwu ndị njem
3 Na-agba ọsọ marathon
5 Ebe ịgba ọsọ
6 Egwuregwu njem maka sọọfụ
7 Ihe omume na njem nlegharị anya
Gịnị bụ egwuregwu ndị njem?
Egwuregwu njem bụ a ụdị njem nlegharị anya nke na-elekwasị anya na egwuregwu. Na-aga ịhụ otu asọmpi ma ọ bụ egwuregwu. Ọ bụkwa ihe a na-ejikarị eme njem iji mee egwuregwu, dị ka ịga otu ụzọ njem pụrụ iche ma ọ bụ ịgba ma ọ bụ igwu mmiri n'akụkụ osimiri nke kachasị mma maka ya. Nlegharị anya egwuregwu na-aga n’ihu taa n’ihi na ọ ga-aba ọnụ ala ịme obere njem karịa ka ọ dị ọtụtụ afọ gara aga. Ọ bụ ya mere e ji enwe ọtụtụ ndị na-eme njem ụbọchị ole na ole ịga lelee egwuregwu ma ọ bụ igwu egwuregwu maka ịtụrụ ndụ dị mfe. Ọ bụ ụzọ ọzọ nke ilele njem anya, lekwasịrị anya n'egwuregwu anyị masịrị na n'ihe omume ntụrụndụ. Ugbu a, njem ahụ gafere ezumike, mgbapụ ma ọ bụ nleta ọdịnala.
Dị egwuregwu ndị njem
Egwuregwu njem nwere ike ịbụ nke ọtụtụ ụdị. Anyị nwere ike gaa na ugwu ugwu skai, iji gaa njem mkpagharị ma ọ bụ gaa marathon na obodo, ebe ọ bụ na e nwekwara ọtụtụ ndị a ma ama. N'aka nke ọzọ, enwere ndị na-eme njem nlegharị anya egwuregwu site na ịga ihe omume ụfọdụ, ọkachasị na egwuregwu bọọlụ, dịka ọ na-eme na Spain ma ọ bụ na Europe dum na ihe omume ndị dị ka Soccer World Cup ma ọ bụ European Cup.
Na-agba ọsọ marathon
E nwere ọtụtụ ebe anyị nwere ike ịgba ọsọ, site na kilomita iri ruo ọkara marathons ma ọ bụ marathons zuru ezu. Ma ụfọdụ n'ime marathons ndị a, nke ọtụtụ narị mmadụ na-akwadebe, bụ ndị ama ama. Otu na New York bụ otu n'ime ha, mana enwekwara otu na Boston, Paris ma ọ bụ Berlin. Ihe omume ndị a buru ibu na-ewere ọnọdụ na ebe dịka obodo ukwu na ha bụ mmemme nke ọ bụ ahụmịhe isonyere. Mana ị ga-adị njikere ịgba ọsọ kilomita iri anọ na abụọ nke marathon.
E nwere ebe ndị chọrọ ịme egwuregwu dị ka ịrị elu, nke chọrọ ọkwa dị oke mkpa, na-aga. Na Spain anyị nwere ebe dịka dịka ọmụmaatụ Naranjo de Bulnes, nke nwere nnukwu mgbidi kwụ ọtọ. Ebe ndị ọzọ dị ịtụnanya bụ Ugwu Asgard dị na Canada, na gburugburu ice na snow, Yosemite na United States, nwere nnukwu mgbidi mgbidi iji gbagoo. Na Patagonia na Argentina anyị na-ahụkwa ugwu dị ịtụnanya bụ nrọ nke ọrịrị ọ bụla.
Ebe ịgba ọsọ
Na Spain anyị nwere nnukwu ebe ntụrụndụ, n'ihi ya enwere otutu njem nlegharị oyi. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ọdụ ụgbọ dị ka Baqueira Beret na Lleida, ama ama nke ọma na naanị, nke dị na Ndagwurugwu Aran mara mma. Ọ nwere ihe ruru kilomita 160 nke akara egwu akara. Ebe ezumike ozo di na Huesca, Formigal, nwere oke ikuku ndi ntorobia. Onye ọzọ a ma ama bụ Sierra Nevada na Granada, ama ama maka ezinụlọ. Na mpụga Spain enwere ebe ndị ọzọ dịka Chamonix na France, Zermatt na Switzerland ma ọ bụ na Portillo, Chile.
Egwuregwu njem maka sọọfụ
Omume nke egwuregwu mmiri zuru ebe niile ma enwere ebe a ga-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile. Na Spain anyị nwere ebe dịka Mundaka beach na Vizcaya, Pantín osimiri na Ferrol ma ọ bụ Razo na A Coruña, ha niile dị n’ebe ugwu. Enwekwara ndi ozo di na ebe di ka agwaetiti, dika El Quemao di na Lanzarote. N’ebe ndịda, anyị na-ahụ ebe dịka Cádiz nke nwere ọtụtụ ụsọ osimiri ebe ị nwere ike ịme ụdị egwuregwu a n’ihi oke ọnọdụ ha.
Ihe omume na njem nlegharị anya
E nwere ihe omume ndị na-ama ama mgbe niile. Ọgwụgwụ nke isi egwuregwu bọọlụ dịka iko mba ụwa ma ọ bụ iko a bụ mmemme na-agba n’ebe dị iche iche. E nwekwara ndị ọzọ dị ka Wimbledon ma ọ bụ dịka ọmụmaatụ Tour de France, ọ bụrụ na ọ na-amasị anyị ịgba ígwè, nke nwere ike ịgbaso ọtụtụ mpaghara na France, ma ọ bụ njem ịgba ígwè nke Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Egwuregwu njem